Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1423
Mitentina 1 205 003 Ar ny tentimbidin’ireo fanafody nomen’ny sampandraharaha eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana ho an’ireo Unité Spéciale anti-dahalo any Betroka. Nanainga ny asabotsy teo ireo zandary ao anatin’ity Unité Spéciale anti-dahalo ity. Nitrangana horohorontany tany Ankazobe, omaly maraina tamin’ny 7 ora sy 30 mn. 5,2 araka ny mari-pandrefesana Richter izany. Tany amin’ny 47 km avaratr’Ankazobe kosa […]
Noheverin’ny olona ho poa-basy… : tsipoapoaka nampatahotra ny manodidina teny Antaninarenina
Nahare zavatra nipoapoaka nifanesisesy ny teny amin’ny faritra avo, toy ny teny Faravohitra, Ambatonakanga iny ny alahady hariva tokony ho tamin’ny 7 ora teo. Niteraka resabe sy tahotra ho an’ny olona sasany izany, noho ny fiheverana fa poa-basy sy fisian’ny fifampitifirana. Tonga teny am-pototsofin’ny polisy izany, ary nanetsika polisy maromaro mihitsy ireo nanamarina ny fiavian’ny […]
Nieren-doza ny mpanao gazety : tapaka indray ny RN-6
Alahady 13 marsa tamin’ny 5 ora sy sasany hariva! Avy namita iraka avy any Antsiranana ny mpanao gazety maromaro avy amin’ny haino aman-jery, gazety an-tsoratra, hitodi-doha ho aty Antananarivo, nandeha tamin’ny fiara tsy mataho-dalana (4 x 4) telo. Rehefa nandalo teo amin’ny lalana (lalam-pirenena RN 6) eo Ambodimadiro, kaominina Anjialava, 41 km, mialoha ny hidirana […]
Par Taratra sur 15/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mangingin-dratsy ny resaka politika, tato ho ato. Ny mpitondra, toa tsy be resaka sy mikombom-bava amin’izay rehetra miseho. Mandry ivohon’ny vato fa miverina ny fitoniana politika ? « Ny rano milamina, manafim-boay », hoy ny fitenenana malagasy izay. Sao tokoa ka mandrimandry manana aretina eo ! Maro tokoa ireo raharaha eto amin’ny firenena ilàna ny raiamandreny hiteny sy hitondra […]
Par Taratra sur 15/03/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Mpanao sinto-mahery, mpanendaka, mpamaky trano… Izany no talentan’ireto jiolahy enin-dahy voasambotry ny polisy avy ao amin’ny poste de police Antaniavo, ny asabotsy teo teny Antohomadinika. Eo amin’ny Dalle Ankazomanga no tena fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny…Mbola vao tovolahikely ry zalahy ireto dia efa ikoizana. Nidoboka am-ponja avokoa ireo jiolahy tratran’ny polisy ireo. Niainga avy amin’ny […]
“Feo roa, gitara roa” : seho roa nanjakan’ny fihetseham-po
Par Taratra sur 14/03/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Izay tsy tonga no nanenina ! Feno tanteraka ny efitranon’ny Cc Esca nandritra ny seho indroa miantoana, ny zoma hariva sy omaly. Feno toy izany koa ny fon’ny mpankafy kanto, faly sy ravo tanteraka, tonga nihaino sy nijery ny « Feo roa, gitara roa », niarahana tamin’i Erick Manana sy Dama. Afa-po ny mpijery, dibo-kafaliana ny mpanakanto… Nanjaka […]
Vokatra fanondrana : miharatsy ny kalitaon’ny lavanila sady lafo
Par Taratra sur 14/03/2016 Economie, NS Malagasy
Nivory ny faran’ny herinandro lasa teo ireo mpandraharaha samihafa miasa amin’ny sehatra lavanila (PNV). Fantatra ankehitriny fa mihen-danja ny lazan’ny lavanila avy aty Madagasikara noho ny faharatsian’ny kalitao. Nilaza ny ao amin’ny minisiteran’ny Varotra sy fanjifana fa handray fanapahan-kevitra hentitra ny fitondram-panjakana ho famerenana ny fanatsarana ny kalitaon’ny lavanila. Hihena antsasany ny vokatra lavanila amin’izao […]
Mitety ny any Azia : nahavory olona 11.000 ny Bloco Malagasy
Naharitra roa herinandro ny fivahinianan’ny Bloco Malagasy, tarika ivondronan-tovovavy mpively amponga, tany Cambodge. Nisongadina nandritra izany dia izany, ny fanentanana momba ny fizahantany tompon’andraikitra. Fanentanana tamin’ny alalan’ny fampisehoana mozika (miisa 16), atrikasa fifanakalozana ara-javakanto, diabe miisa fito ary fampirantiana sary. Tamin’ireo hetsika samihafa ireo, nahavory olona miisa 11.000 ireo andriambavilanitry ny Bloco Malagasy. Ankoatra ny […]
Lefakozatra : hojerena manokana ny zaza latsaky ny 5 volana
Par Taratra sur 14/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Mahatratra 4 tapitrisa mahery ny isan’ny zaza latsaky ny 5 taona homena ny vaksiny fiarovana ny aretina poliomelita andiany fahafito. Natokana ho an’ny zaza latsaky ny 5 taona ny vaksiny satria efa nahazo ny fatra fiarovana sahaza ireo miohatra ny 5 taona. Hatomboka ny alatsinainy ny asa fizarana vaksiny atete am-bava ary hifarana ny zoma […]
Valan-javaboary ao Isalo : malalaka ny fidiran’ireo mpitrandraka vato …
Mitazam-potsiny sy mangina ireo manam-pahefana sy mpitandro filaminana noho ny fahavakisan’ny valan-javaboary ao Isalo. Milaza tsotra izao ireo mpitrandraka vatosoa tafiditra ao amin’ny valan-javaboary ao Isalo fa misy amin’ireo tompon’andraikitra ireo mihitsy no manome alalana azy ireo. Manana mpiasa mpitrandraka vatosoa hatramin’ny polisy, raha ny voalazan’ireo olona tafiditra ao Isalo ireo ihany. Manaiky koa izy […]
Nanadio tanàna ny CUA sy ny Lions Club
Notanterahina teo amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, afakomaly, ny fankalazana ny faha-70 taona niarahan’ny Lions Club sy ny Firenena mikambana. Nanao asa niaraka amin’ny kaominina Antananarivo (CUA) izy ireo ka nanadio ny teny anivon’ny boriboritany enina. Tsy vitan’izany fa nomen’ny Lions Club sakafo atoandro koa ireo mpamafa lalana miisa 600, niarahana t CUA. « Zava-dehibe izao fanasoavana […]
Fanadihadiana nataon’ny BM : sarotra ny ady amin’ny fahantrana amin’ireo lazaina fa “malemy”
Mitombo hatrany ary vao mainka mahazo vahana ny fahantran’ny mponina maro aty Afrika, nanomboka ny taona 90, araka ny tatitra farany nataon’ny Banky iraisam-pirenena (BM) ny taona 2015. Mikasika ny tsy fitoviana eo amin’ny fari-piainana izany, miaraka amin’ny karazam-pahasahiranana rehetra hita aty amin’ny tapany atsimon’ny kaontinanta afrikanina. Na mahazo vahana aza ny fahantrana aty Afrika, […]
Rugby à VII – Aroi 2016 : nanao pao-droa ny Makis de Madagascar
Par Taratra sur 14/03/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nanjakan’ny ekipam-pirenena malagasy, ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, teo amin’ny rugby à VII, sokajy U16 sy U18. Fihaonana izay nahitana ny fahaiza-manaon’ireo mpilalao, ity taranja ity. Nifarana tetsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, omaly alahady, ny fiadiana ny tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (Aroi), taranja rugby à VII, ho an’ny sokajy zandriny U16 sy U18. Nanao […]
Landy R., Mamiherison, Fano.
Tsy fahamarinana… : manaitra ny mpitondra ny ao Ambatovy #canada #sherrit #ambatovy
Par Taratra sur 14/03/2016 Divers, NS Malagasy
Efa tokony hilamina nefa mbola tratry ny antsojay ! Nambaran’ny filoha lefitry ny orinasa Ambatovy, volana vitsy lasa izay tamin’ny mpanao gazety, fa efa vita sy milamina ny onitra nangatahan’ilay mpitory manoloana ny nandroahana ilay ramatoa iray tsy hiasa eo anivon’ity tetikasa any Ambatovy ity. Anisan’izany ny vola hatrany amin’ny 80 tapitrisa Ar sy ny 90 […]
Kick-boxing – Mondiaux 2016 : hanafika any Ireland i Madagasikara
Mazava. Handray anjara ary handefa solontena amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany eo amin’ny kick-boxing, sokajy « cadets » sy « juniors » i Madagasikara. Fifaninanana iraisam-pirenena hotanterahina, ny volana aogositra izao, any Ireland. Raha ny fampitam-baovao teo anivon’ny federasiona malagasy (FMKB/DA) tarihin’ny filohany, Andrianirina Briand, anisan’ny handrafitra ny ekipam-pirenena ireo mpikatroka sangany, toa an’i Lavakely sy Faratiana ary Miora […]
Fampandrosoana no tanjona. Ankehitriny, efa tafapetraka eto Madagasikara ny vinavina na fandaharan’asa “Shuttle Time” eo amin’ny taranja badminton. Vinavinan’asa avy amin’ny kaonfederasiona afrikanin’ny badminton izy io. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny federasiona malagasy (Fmbad), badminton atao eny an-tsekoly ny “Shuttle Time”. Izany hoe, tafiditra indrindra amin’ny fandaharam-pianarana eo amin’ny fanatanjahantena an-tsekoly. Tafiditra amin’ireo […]
Tenisy – Afrique Junior 2016 : eo ho eo ny vokatra ho an’i Madagasikara
Sady tsy ratsy no tsy tsara ny vokatra azon’ireo kilonga Malagasy, miatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja tenisy, sokajy U14 sy U16 lahy sy vavy. Fihaonana, tanterahina any Pretoria, Afrika Atsimo. Ireo resy teo amin’ny andro voalohany mantsy, afaka nanarina ny fahavoazany teo amin’ny andro faharoa, izay natao omaly, alahady. Ireo tsara fanombohana […]
Tratry ny antsojay nataon’ny mpitsara ny Cnaps Sport, teo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra. Vokany, lavo tamin’ny isa mavesatra ny ekipa malagasy. Resin’ny Wydad, tamin’ny isa mavesatra 5 noho 1 ny Cnaps Sport, ny asabotsy alina, tao amin’ny kianja Mohamed V, Maraoka. Fihaonana tafiditra amin’ny lalao ampahavalon-dalana […]
Norombahin’ny sekoly ambony Essca ny amboaran’ny “Smatch’In 2016”, taranja basikety, sokajy lahy sy vavy. Tontosa, omaly, tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina mantsy ireo lalao famaranana lahy sy vavy rehefa nizotra nandritra ny herinandro ny hetsika. Nanao pao-droa ity sekoly ity, satria nalainy avokoa ireo amboara lehibe teo amin’ny lehilahy sy vehivavy. Teo amin’ny vehivavy, tsy […]
Anosipatrana : hametraka ny fitaovany ny MBS
Par Taratra sur 14/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tsy ho ela intsony. Nitsidika ny MBS teny Anosipatrana ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc, ny asabotsy teo. Nijery ny fotodrafitrasa hany mbola misy teny an-toerana ny tenany. “Hisokatra ny MBS ary efa hanamboatra ny fotodrafitrasa rehetra isika. Hiantso teksnianinaa alemà, manana traikefa amin’ny fametrahana ireo fitaovana rehetra isika ary hatao tena matihanina. Tsy maintsy […]
Maty ary nipotsaka, noraofina teo amin’ny arabe mihitsy ny atidohan’ity tovolahy iray 22 taona nitondra bisikileta, voadonan’ny taxi-be 192 teny Mandroseza, ny asabotsy teo, tamin’ny 3 ora tolakandro. Araka ny fanazavana avy eny an-toerana, nifanenjika ny taxi-be roa ka raha teo am-pisongonana ny iray ilay taxi-be iray no sendra ilay bisikileta. Tsy tafala ity farany, […]
“Aleo aloha hivoaka ny didy fampiharana. Efa mivoaka ny lalàna momba ny fanoherana, fa tsy mbola mivoaka ny didy fampiharana. Izay no mamaritra ny lalana tokony haleha.” hoy ny depiote Tim, Randrianarisoa Guy Rivo, teny Andraisoro, afakomaly. Mpanohitra foana ny mpanohitra, fa mila manazava amin’ny vahoaka ny vinam-piarahamonina na ny zavatra tiana haroso amin’ny […]
Anisan’ny voandalana tamin’ny fitsidihan’ny fioha Rajaonarimampianina sy ireo delegasiona, notarihiny tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny fiverenan’ny mpampiasa vola eto amintsika indray. Eo koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta. Fantatra tamin’izany fa hiverina hampiasa vola eto amintsika, eny Ambohimangakely ny orinasa Maorisianina iray ka hampiditra mpiasa 2 500 amin’izao voalohany izao. Hiakatra ho 3 500 […]
Tsy mifaditrovana ny jiolahy : voatifitra teo amin’ny fony ilay rangahy, naratra mafy ny zanany roa
Maty tsy tra-drano ny raim-pianakaviana iray notifirin’ny jiolahy. Mbola norarafan’ny jiolahy ny tifitra ihany koa ny zanany… Vola 440.000 Ar no namoan’ireto jiolahy ny raim-pianakaviana iray, ary mbola notifiriny ihany koa ny zanany roa ary ny mpanampiny iray, tany Ankadivoribe Atsimondrano, ny zoma alina teo. Dimy lahy nitondra basy P.A iray sy basim-borona ary sabatra […]
« Précédent 1 … 1 421 1 422 1 423 1 424 1 425 … 1 489 Suivant »